IKHITSHI KWIWINDOWS NGAPHEZULU KWESINK (UYILO KUNYE NEENGCONO ZEDECOR) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Ikhitshi kwiWindows ngaphezulu kweSink (Uyilo kunye neeNgcono zeDecor)
Ikhitshi kwiWindows ngaphezulu kweSink (Uyilo kunye neeNgcono zeDecor)
Wamkelekile kwigalari yethu yeefestile zekhitshi ngaphezulu kweengcinga zoyilo lwesinki kubandakanya unyango lwefestile, iintlobo zeewindows ozisebenzisayo, iindlela zokuhombisa kunye nokunye.
Indawo entle yokuba nefestile ekhitshini ingaphezulu kwesinki. Oku akuvumeli kuphela ukukhanya okuhle ekhitshini, kodwa ikwabonelela ngokufikelela ekubukeni ngaphandle ngelixa umile esinkini.
Ukufumana ukukhanya ekhitshini kubalulekile, kodwa indawo eninzi yodonga ifuna ukuthathwa ziikhabhathi kunye neetafile. Kungenxa yoko le nto ukubeka ifestile ngaphezulu kwesinki kuncedo olumangalisayo kuzo zombini izibane zokukhanya kunye nendawo, kuba akufuneki ubeke ikhabhinethi ngaphezulu kwesinki nangayiphi na indlela. Oku kungenxa yokutshiza kunye nendawo efunekayo kwiipompo kunye ne-backsplashes.
umnyango barn ikhitshi siqithi
Ngokujonga, iwindow ngaphezulu kwesinki kunokuba luncedo kakhulu ukuba abantwana badlala ngaphandle kwaye umsebenzisi uhlamba izitya okanye wenza isidlo sangokuhlwa ngelixa esakwazi ukugcina iso ebantwaneni.
Ukuba nefestile yokuntywila ekhitshini kunokuba sisimemo esivulekileyo kubuchule bokwenza izinto. Eli lithuba lokuthatha iwindow encinci kwaye wenze ifuthe elikhulu. Ifestile kufuneka ibengaphezulu kwesinki ukuze yonke imibhobho enokukhathalelwa ngokufanelekileyo, kodwa ngaphandle kokuba akukho mida mininzi kwizinto onokukhetha kuzo.
Iingcamango zeWindows Window Sink
Ngaphezulu kweZinki zoNyango lweSinki yeKhitshi
Iifayile zeRoller Roller
Ukukhanyisa ngaphezulu kwesinki yekhitshi ngefestile
Ukudlula ekhitshini nge Window Engaphezulu kweSink
Isinki yeKhitshi leKhitshi laseBay
Iigridi zeColonial Windows
Ikhitshi elincinci leWindows ngaphezulu kweSink
Ukuhombisa ngaphezulu kweWindows Window
Iishelufa le Window yekhitshi
Bobuphi ubungakanani befestile ohamba ngaphezulu kwesinki yekhitshi?
Yintoni onokuyibeka ngaphezulu kwesinki engenafestile?
Indlela yokumema ukuzisa ukuchukumisa ngaphandle ekhitshini lakho kukusebenzisa iwindow yakho yeefestile zezityalo ezincinci (kufutshane nesinki ukuze ungalibali ukuzinkcenkceshela.) Endaweni yokusebenzisa izityalo umntu unokongeza Izinto zokuhombisa kule ndawo. Zama iisepha okanye iingqayi zokuhombisa, nantoni na othanda ukuyibona xa usenza izitya!
Xa usiza nemibono eyahlukeneyo kunye nemibala yindawo entle yokuqala. Ngamanye amaxesha isikwere esilula esidibeneyo kunye noyilo lwekhitshi kunye nekhaya lilonke. Ngamanye amaxesha ukuzama isangqa, iheksagon, unxantathu, okanye nayiphi na enye imilo inokubonisa imilo kulo lonke ikhaya okanye ekhitshini.
Xa kuziwa kumbala into enye inokuthiwa-ukuyigcina ilula nge-white, beige okanye grey kunokuba yiyo yonke into oyifunayo kweli qhekeza liluncedo lekhitshi. Ukuba uziva ngathi ufuna into yokuphuma okanye uqaphele ekhitshini le yindawo elungileyo yokongeza kunye nombala oqaqambileyo kwi-trim.
Enye into epholileyo yokwenza - ukuba awucwangcisi ekusebenziseni iwindow ukujonga ngaphandle- ukujika iglasi ibe sisiqwenga sobugcisa seglasi. Oku kuvumela ukukhanya kungene kwaye kwenzelwe umva mhle.
Ukuba ucinga ukuba izimvo zefestile ngokwazo bezingenamda, linda ude ubone ukhetho kunyango lwefestile. Iziseko ezimbalwa zixutyushwa ngezantsi.
Amakhethini anokuba yindlela yefashoni yokuqinisekisa ubumfihlo xa kufuneka njalo kwaye uvumele ukukhanya xa kufunwa. Amakhethini anokuza ngeendlela ezahlukeneyo, ubukhulu, izixhobo kunye nemibala. Izinto ngokwazo zibalulekile kwizinto malunga nokuba zilungile ngaphezulu kwesinki. Oku kunokuthetha ukuba amalengalenga ayatshiza. Ukuba nezinto ezinokuhlambeka okanye ezosulwayo zivumela iimeko zococeko kuyo yonke indawo.
Xa kuziwa kubume kunye nobukhulu kukho ukhetho lobude, nokuba injongo kukuphakama kokuhombisa okanye amalengalenga anokugquma ngokupheleleyo iwindow. Imibala yokukhetha ixhomekeke kukhetho olwenziwe apha ngasentla, kunye nesitayile sangoku okanye isimbo esifunwayo sekhitshi ukuze ilungelelanise ngokufanelekileyo.
Ngelixa iimfama zinokubonakala ngathi yeyona nto ikruqulayo, ngamanye amaxesha ziye zibe zezona zinokwenzeka. Iimfama zihlala zimhlophe okanye zi-beige ukuze zidibane, kwezinye iimeko zibhetele, ukuba kukho indawo ekujoliswe kuyo ekhitshini. Iimfama zinzima kancinci ukuzenza xa ifestile imilo engaqhelekanga, kwaye kwezo meko ukubambelela ngamakhethini kunokuba ngcono. Iimfama zenziwe ngokusula izinto ezinokulunga ngaphezulu kwesinki.
Iiwindow ze-Window roller azibizi kakhulu, zihlala ixesha elide kwaye zinokutshatisa phantse zonke iindlela zokuhombisa. Ezi ndleko zibiza malunga ne-35 ukuya kwi-60 yeedola ngefestile kwaye umbono olungileyo wokuthintela ukukhanya kwelanga okugqithileyo kunye nokongeza ubumfihlo.
Ukukhanyisa ngaphezulu kwesinki yekhitshi kubalulekile, nokuba kukho iwindow apho. Kungenxa yokuba ifestile ayisoloko ingenisa ukukhanya, kuba ilanga alisoloko likhanya kwaye uyakufuna ukukhanya okongezelelekileyo ukulungiselela ukutya kwangaphambili. Ukucoca ebusuku okanye kwiinyanga zasebusika kulungile ukuba ube nomnye umthombo wokukhanyisa ngaphezulu kwesinki.
Uhlobo olusetyenziswa rhoqo lokukhanyisa ngaphezulu kwesinki yekhitshi kukukhanya kwezibane. Umbutho weSizwe weKhitshi kunye neBhafu ucebisa ukufakela isibane esisisiseko sokukhanya kwesi sizathu. Olu hlobo lwemidlalo yokukhanyisa luya kukunika umbono ongaphazanyiswanga ngefestile yakho kunye nokukhanya okuninzi apho ufuna khona.
Uhlobo lwebhalbhu yesibane uqobo kuyacetyiswa ukuba isebenzise i-50 ukuya kwi-90 watt halogen bulb. Ukuba unesitya sokuhlambela esiphindwe kabini okanye isinki enkulu, amanzi amaninzi aphezulu aya kufuneka. Ukukhanya okugqityiweyo kuhlala kulawulwa siswitshi ecaleni kwesinki kunye notshintsho lokulahlwa kwenkunkuma (ukuba kukho enye).
Xa ufaka izibane ngaphezulu kwesinki kubalulekile ukuba uzenze ngokuthe ngqo ngaphezulu kwesinki ukunqanda izithunzi. Oku kuyinyani kuyo yonke into ebuyisiweyo kunye nokukhanya kwesibane.
Izibane ezikhanyayo zesconce zinokukhokelela ekukhanyeni kwindawo osebenzela kuyo kwaye zibonelele ngendlela ebalaseleyo yokubopha umdlalo ukuze utshatise nezinye izixhobo zekhabethe yekhitshi.
Eli khitshi lisebenzisa izinto ezimbini zokukhanya ezikhanyayo zokubonelela ngenkangeleko yeediliya ngelixa uthelekisa izakhelo zefestile, kunye nokunye ukugqitywa.
isuti emhlophe yomtshakazi
Izibane ezijingayo zinokubekwa ngaphezulu kwesinki kunye neziphumo ezilungileyo. Xa ubeka izibane ezixhonywe ngaphezulu kwesinki kunye neetafile zokubala umgama oziisentimitha ezingama-30 ukuya kwezingama-40 udla ngokusetyenziswa ngee-intshi ezingama-30 zezona zibalaseleyo. Lo mgama ulinganiswa ukusuka kumphezulu we-countertop ukuya ezantsi kwesibane.
Elinye icebo elilungileyo kukuba ukhethe indawo efihlakeleyo efihla ibhalbhu yokukhanyisa emacaleni ukunqanda nakuphi na ukuqaqamba okungqwabalala. I-60 watt halogen bulb ibonelela ngexabiso elifanelekileyo lokuqaqamba kulo msebenzi.
UKUYA Ikhitshi lidlula ngefestile ebekwe ngaphezulu kwesinki iluncedo ekudluliseni ngokulula ukutya okusuka kwiyill yasemva kwendlu uye ekhitshini. Dlula kwiifestile unokufumaneka ngokudibanisa amagumbi okutyela kunye namagumbi okuhlala.
Ubungakanani bokudlula ngefestile oyifunayo buxhomekeke kwindlela ezikufutshane ngayo iikhabhathi zakho. Ngokubanzi ezi iintlobo zeefestile zi-16 ubuncinci ububanzi kwaye umphakamo ufikelela kwi-12 ukuya kwi-15 ″ ngaphantsi kwesilingi.
Iindleko zokuthenga kunye nokufaka enye yezi windows zinokuvela naphi na ukusuka kwi- $ 500 ukuya kwi- $ 1000 okanye ngaphezulu kuxhomekeke kudidi lokudlula ngefestile oyikhethileyo kunye nobukhulu bayo.
Enye yezona zinto zibalulekileyo malunga nefestile yokuntywila ekhitshini kukuba uhlala unendawo yokubeka izinto ezifana nezityalo zendlu okanye iisepha. Ngefestile encinci ye-bay ngaphezulu kwesinki inika indawo entle enkulu kuzo zonke iintlobo zezityalo ukucwina ilanga kunye neetrinkethi ukunceda ukuhombisa ikhaya.
ukuba wenze ntoni kwisikhumbuzo sakho
Ifestile ye-bay ngokwayo isitayile esihle sefestile, esongeza umdla kunye nokwenza ukuba ukukhanya kube nokuvula iindiza ezintathu nokuba zincinci indawo ekhoyo.
Iifestile ezinkulu zemifanekiso ngaphezulu kwesinki yekhitshi zibonelela ngemibono engaphazanyiswanga kwaye zilungile kwabo babukele abantwana abancinci bedlala okanye bebabaza nje ngaphandle ngelixa umntu ecoca izitya. Ezi zihlala zixabiso eliphakathi kwe- $ 300 kunye ne-1200 yeedola ukuthenga kwaye zifakwe yingcali.
Iifestile zeCasement ziqhotyoshelwe kwisakhelo esineehenjisi ecaleni kwaye sinokuvulwa ngekhrank. Banamandla kwaye basebenza kakuhle kwiifestile apho ungenako ukutyhala umbhinqo ngqo phezulu ukuze uvule. I-avareji yefestile ye-casement ibiza phakathi kwe- $ 300 ukuya kwi-500 yeedola ukuthenga kwaye uyifakile.
Iifestile ezinoyilo lwesitayile sobukoloniyali zikwabizwa ngokuba zii-Muntins. Iigridi zecolonial zahlula iifestile ezingatshatanga okanye ze-casement kwaye zibambe iipaneli ezincinci zeglasi ezibizwa ngokuba zizibane endaweni. Ezi zazisetyenziswa emakhaya ikakhulu kude kube phakathi kwinkulungwane ye-19 xa kwakubiza kakhulu ukuvelisa iipani ezinkulu zeglasi zeefestile. Ngesi sizathu zihlala zisetyenziswa kumakhaya anqwenela isitayile sobuKoloniyali.
Ngenxa yobume bendawo engaphezulu kwesinki, uninzi lwefestile esetyenziswe ngaphezulu kwesinki iya kuthathwa njengeincinci. Kukho iifestile ezincinci ezingaqhelekanga- ngaphandle kokusebenzisa sonke isithuba ngaphezulu kwesinki.
Ezi zihlala zisetyenziselwa ngakumbi ukuhombisa kunokubamba ukukhanya okanye ukubona ngaphandle. Emakhitshini anesilingi emide, iifestile ezincinci zihlala ziphakanyiswa kwaye azikwazi kuvulwa. Ngamanye amaxesha zidityaniswa nezinye windows ekhaya ukwenza umphandle ubonakale ulinganayo. Kumakhitshi aneefestile ezinqunyelweyo okanye ezincinci, ukukhanya okongeziweyo kuyafuneka rhoqo.
Ukucofa iwindow ngasentla kusenokwenziwa ngeendlela ezininzi. Into elula njengokongeza ezinye zonyango olukhankanywe apha ngasentla ngezinto zokuhombisa, okanye into enzima njengokongeza izibane zomtya, umsebenzi wobugcisa okanye iishelfu kunye nekhabhathi ngaphezulu kwefestile.
Ukongeza ishelufu ngaphezulu kwefestile okanye kwelinye icala kunokuba yindawo eyongezelelweyo yezinto zokuhombisa okanye izinto eziluncedo. Bona Okuninzi Uyilo lwekhitshi lendlu yasefama Apha.
Into elungileyo ongayibeka ngaphezulu kwefestile esinki yiwotshi, njengoko ihlala iyindawo ejongene nayo xa upheka okanye ucoca ekhitshini, kwaye yindawo ekungekhe kubekho iikhabhathi okanye izixhobo zombane kuyo.
Okanye zama nje ukuxhoma uphawu lwesitayile eseludongeni ukuze ugqibezele uyilo lwakho. Le khitshi ine-niche yodonga ngaphezulu kwefestile enokusetyenziselwa ukubonisa izinto zokuhombisa. Uphawu lwasekhitshini olwenziwe ngesiko lomthi lubeka umnxeba ekhaya ngelixa ifaskoti isinki Isikimu sombala ongathathi hlangothi kunye nomgangatho okhuni womthi unika indlu yefama vibe.
Izinto eziluncedo ezinje ngeesepha ezongezelelweyo okanye izinto zokucoca zinokufakwa kwizikhongozeli ezinomtsalane neziphumo ezilungileyo. Ubeka ntoni ngaphezulu kwefestile yesinki yekhitshi? Nokuba yeyiphi eyona nto iluncedo okanye entle kuwe iyinto enokunyuka iye apho, akukho zimpendulo zichanekileyo okanye zichanekileyo.
Ukuhombisa ngezantsi kweWindows Window
Oku Ikhitshi elimhlophe lelizwe usebenzisa umqolo wezityalo ezityhidiweyo ezantsi kweefestile zemifanekiso
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla kukho ukhetho lokubeka ishelufu ngaphezulu kwefestile. Ayisiyiyo kuphela indawo eyongeziweyo yokubeka izinto, kodwa ikwadala isithintelo sokukhanya, sikhokelela ekukhanyeni ezantsi xa kuthelekiswa nayo yonke indlela yokunyuka ukuya eluphahleni apho kungafuneki kangako.
Ukubeka ishelfu ngapha nangapha kwefestile lolunye ukhetho olunokuvumela ukuba ubonise ezinye zezinto zakho ozithandayo zokuhombisa. Iikhitshi ezineshelfu evulekileyo inokusetyenziselwa ukongeza umdla obonwayo okanye ukugcina izinto eziluncedo zifikeleleke ngokulula.
Ayikakhankanywa ukhetho lokukhetha ishelfu phantsi kwefestile. Uninzi lweefestile kukho iwindow eshiya isuntswana lomda, kwaye ngeewindows kukho isill enkulu enokubekwa kuyo izinto. Ngokongeza ishelufu phantsi kwefestile unika umda omkhulu, kufutshane nesinki ukubeka izinto eziluncedo kuyo. Kubalulekile ukuba le ayenziwanga ngezinto ezingasabeli kakuhle ngamanzi okanye iisepha, njengoko inokubuyela umva kwakhona. Kukwabalulekile ukuba ungasondeli kakhulu kwisinki kunye netepu eneshelfu ebangela ukuba ingasebenzi, okanye ungqubeke kuyo ngalo lonke ixesha uzama ukusebenzisa isinki.
Akukho sayizi ifunekayo yefestile, into oyifunayo sisithuba. Ngokwesiqhelo iwindow ngasentla kwe isinki yekhitshi ukuphakama okufanayo neekhabhathi ngapha nangapha kwesinki - ukunika ukujonga okuhlangeneyo kunye nokugcina umgca wamehlo ngokufanayo. Ukusuka apho ulinganise indawo phakathi kwekhabinethi nganye kwaye inokuba nkulu kangakanani iwindow.
Kungenxa yokuba iwindow inokuba bubungakanani, oko akuthethi ukuba kufanelekile. Ngobungakanani ngokungaqhelekanga, okanye iifestile zoyilo zejometri zingcono ukuba zincinci kunendawo yonke ekhoyo. Ngaphezulu kwelo, ukuba ufuna naziphi na iishelufa okanye ubugcisa ngaphezulu okanye ngaphantsi kwewindow, awufuni ukuba iwindow ithathe isithuba sonke kunye nabo.
Shiya igumbi elaneleyo lento oyifunayo kunye nee-intshi ezimbalwa ngaphezulu nangaphantsi kwento leyo ukuze ingalunganga ngaphezulu kwefestile. Kulungile ukukhumbula ukuba ifestile inesangqa ngeenxa zonke kwicala ngalinye, ithatha iisentimitha ezimbalwa kwicala ngalinye lefestile.
Unokubeka nantoni na ngaphezulu kwisinki ngaphandle kweefestile. Ekuphela kwento ekufuneka uyikhumbule kukuba kukho ukubakho kokutshiza ukuba ubeka nantoni na kufutshane kakhulu nesinki. Oko kunokuluhambisa uluvo lwento oyibeke apho - kodwa ayizukundinqanda. Unokubeka ubugcisa, iiwotshi, imifanekiso, izibane, iikhabhathi, iishelfu, njl., Ukuba ingena kwisithuba esinokuthi siye ngaphezulu kwesinki.
Ukuba ufuna uncedo ekuyileni indawo yakho kukho inani Isoftware yoyilo ekhitshini ukukhetha kwi. Oku kunokukuvumela ukuba wenze isicwangciso sakho somgangatho kubandakanya ukongeza iikhabhathi, isinki, iifestile kunye nezixhobo zombane ukuze ufumane inkangeleko oyifunayo. oku kunokuba luncedo kakhulu ngaphambi kokuthenga naziphi na izixhobo, ukwenza nawuphi na umsebenzi wokulungisa ngokutsha okanye ukuqesha ikontrakta.
ukuba wenze ntoni emva kokutshintsha igama
Iwindow yaseRustic yokuhombisa iKhaya- iWindows Window Barnwo… $ 27.99 umthengisi ogqibelele (2426) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-Lemonbest 18 Watt LED Panel Light, Isikwere R ... $ 19.89 umthengisi ogqibelele (145) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Izixhobo zeKhaya zeAchim zeZintambo iinyembezi simahla D… $ 10.33 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-1088 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
ILutanky Modern Bay Window Cushion W… $ 49.95 umthengisi ogqibelele (22) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
isipho somtshato somfazi ngosuku lomtshato
Ixabiso eliqhelekileyo lokutya umtshato